बन्दागोभीको पत्रपत्रले फ्याल्ने रहेछ, हाम्रो सातपत्रका रोगहरु । खान जान्नुहुन्छ तपाई ? सिक्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
बन्दागोभीले स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै बिभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ । त्यसैले बन्दागोभीको नियमित सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
बन्दागोभीको नियमित सेवन गर्नाले स्तन क्यान्सर, पोस्टेट क्यान्सर देखि लिएर पेटमा अल्सर तथा क्यान्सर हुनबाट बचाउँनका साथै बिभिन्न समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसको नियमित सेवनले शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि ल्याउँछ ।
यस्ता छन् बन्दागोभीका फाइदाहरु
१.क्यान्सरको जोखिम घटाउन
बन्दागोभीमा पाइने लुपिओल, सिनिग्रिन र सल्फोराफेन जस्ता तत्वले शरीरभित्र क्यान्सरको ट्युमर बढ्ने जोखिम कम गर्छ । बन्दागोभी खाइरहने महिलामा स्तन क्यान्सर देखापर्ने जोखिम कम रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
२.रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न
बन्दागोभीमा पोटासियम प्रचुर मात्रामा पाइने भएकाले यसले रक्तवाहिनी नलीहरूलाई सुचारु राखी रगतको बहावलाई नियमित गरिदिन्छ, जसले गर्दा रक्तचाप थपघट हुने जोखिम घट्छ ।
३.शरीरका विकार फाल्न
बन्दागोभीमा भिटामिन–सी र सल्फर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरमा जम्मा भएका विकारलाई शरीरबाट निकास गरिदिन्छ । बाथ रोग, युरिक एसिड र छालासम्बन्धी रोग लाग्ने जोखिमलाई पनि यसले कम गरिदिन्छ ।
४.दिमाग तेजिलो बनाउन
बन्दागोभीमा भिटामिन–के र एन्थोक्यानिन्स जस्ता तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले दिमागलाई स्वस्थ र तेजिलो बनाउन मद्दत गर्छ । यस्ता तत्वले स्नायुलाई खराब हुनबाट जोगाउने र अल्जाइमर जस्ता बिर्सिने रोगसँग लड्ने क्षमतासमेत बढाउने गर्छ ।
बन्दागोभीमा कार्बोहाइड्रेट र फ्याट कम तथा फाइबर बढी हुने भएकाले वजन घटाउने खोज्नेहरूका लागि यो लाभदायक हुन्छ ।
चिल्लो छाला हुने र डन्डीफोर आइरहने समस्या छ भने बन्दागोभीको तरकारी, सलाद खादि खाइरहने गर्नुपर्छ । यसमा पाइने सल्फरले छालासँगै कपाल र नङलाई पनि सुन्दर बनाउँछ ।
उमालेर खानुहोस् यी तरकारी
नेपाली भान्सामा तरकारी उमालेर खाने चलन खासै छैन । तर, केही तरकारी यस्ता हुन्छन्, जसलाई उसिनेर वा उमालेर खाँदा अन्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर तागतिलो र स्वादिष्टसमेत हुन्छ ।
पालुङ्गो, गाजर, तरुल र बन्दागोभीलगायत तरकारी उमालेर खाँदा स्वाद तथा पोषणको मात्रा धेरै बढ्छ । उमालेको÷उसिनेको तरकारी फ्राई गरेर पकाएको भन्दा बढी लाभदायक हुन्छ ।
यस्तो तरकारीको सेवनले मोटोपनामा पनि कमी आउने स्वास्थविद्हरू बताउँछन् । केही तरकारीलाई सलादको रूपमा पनि काँचो नै खान पनि सकिन्छ । उमालेर तथा सलादका रूपमा खान सकिने तरकारीबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ ː
गाजर भिटामिन ‘ए’को भरपूर स्रोत हो । यसको सेवनका लागि सादा पानीमा एक मुठ्ठी गाजर काटेर राख्नुहोस् । यसमा एक चिम्टी नून तथा थोरै मरिच मिसाउनुहोस् । त्यसपछि यसलाई उमालेर खानुहोस् । यसरी खानाले आँखालाई समेत राम्रो हुन्छ ।
सलगम स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्यवस्तु हो । यसको सेवनले रगतको कमी हुन दिँदैन भने महिला महिनावारी हुँदा पनि यसले राम्रो गर्छ । त्यसका लागि दैनिक एउटा सलगम उमालेर खानुपर्छ । तर, यसलाई ३ मिनेटभन्दा धेरै बेर उमाल्नु राम्रो हुँदैन ।
आलु प्रायः भान्सामा नछुट्ने तरकारी हो । तरकारीको स्वाद बढाउन आलु मिसाउने गरिन्छ । तर, यसलाई उसिनेर मात्र पनि खान सकिन्छ । भुटेको वा तारेकोभन्दा उसिनेको आलुमा पोषक तत्व बढी मात्रामा पाइन्छ ।
भटमास प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । यसको लाभदायक सेवनका लागि पानीमा ६ मिनेट उमाल्नुहोस् । त्यसपछि यसमा एक चिम्टी नून र थोरै मरिच मिलाएर खान सकिन्छ । उमालेको भटमासले मधुमेहका रोगीलाई पनि फाइदा पुग्छ ।
भिटामिन ‘ए’ बढी पाइने तरकारीमध्ये पालुङ्गो पनि हो । विज्ञहरूका अनुसार अनुसार हरियो पात भएको पालुङ्गो उमालेर खानाले यसको पोषक तत्व दोब्बर बढ्छ । पालुङ्गोलाई रायो, मेथीलगायतको सागमा मिसाउँदा स्वादिलो हुन्छ ।
मकै प्रायः भुटेर खाने गरिन्छ । तर, यसलाई उमालेर खानु नै बढी लाभदायी हुन्छ । यसलाई उमालेर पकाउन अन्य खाद्यान्नको तुलनामा बढी समय लाग्छ । यसमा कार्बोहाइड्रेट, चिल्लोलगायत पोषणका साथै रेशा हुन्छन्, जसले कब्जियत हटाउन मद्दत पुर्याउछ ।
सखरखण्डमा धेरै स्टार्च (शक्तिवद्र्धक) तत्व पाइन्छ । यो जमीनमुनि फल्ने खाद्यवस्तु हो । यसलाई पोलेर पनि खान सकिन्छ । तर, उसिनेर खानु बढी लाभदायक हुन्छ ।
फूलगोभी सबैजसोलाई मन पर्ने तरकारी हो । यसलाई धेरैले तारेर नै खाने गर्छन् । तर, यस्तो गर्नाले यसमा रहेको न्युट्रियस तथा भिटामिन नष्ट हुन्छ । त्यसैले, यसलाई बफाएर खानु सबैभन्दा राम्रो तरीका हो ।
बन्दागोभी धेरैले रुचाएको पाइँदैन । तर, यसमा धेरै पोषक तत्व हुन्छ भन्ने कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ । झन् यसलाई उमालेर खानाले स्वाद र लाभदायक तत्व बढ्छ । यसलाई उमाल्न प्रयोग गरिएको पानी सेवन गर्नाले पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ । किनकि, त्यसमा धेरै पोषण पाइन्छ ।
ब्रोकाउली उमालेर खानु अति लाभदायक मानिन्छ । उसिनेको ब्रोकाउलीले ग्याष्ट्रिकका रोगीलाई फाइदा पुग्छ । यसलाई उमाल्ने बेला थोरै जैतुल तेल मिसाउनाले स्वादिष्ट बन्छ ।
फर्सी बिशेष गरी तरकारी पकाउन तथा सलाद बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए, फलाम, फाइबर लगायत बिभिन्न पौष्टिक तत्वहरु पाउन सकिन्छ ।यसको नियमित सेवनले शरीरलाई स्वस्थ राख्नमा लाभदायी हुन्छ ।
१. फर्सीको नियमित सेवनले शरीरलाई स्वस्थ र फूर्तिलो बनाई राख्न मद्दत गर्छ ।
२. फर्सीमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए हुने भएकोले यसको नियमित सेवनले आँखालाई तेजिलो बनाउँछ ।
३. फर्सीमा भिटामिन, पोटासियम तथा म्याग्नेसियम हुन्छ जसले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनमा सहयोग गर्छ ।
४. यसको सेवनले बढी तौल भएका ब्यक्तिहरु तथा मोटोपन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
५. फर्सीको नियमित सेवनले मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै ब्लड सुगरको लेभललाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ ।
६. रातिमा निन्द्रा नलाग्ने तथा निन्द्रा कम लाग्ने ब्यक्तिहरुलाई निन्द्रा लगाउनमा मद्दत गर्छ । साथै यसको फल मात्र नभएर साग तथा दाना पनि खानमा उपयोगी हुन्छ ।
फर्सीको पातमा पाइने एन्टी–अक्सीडेन्टले बढ्दै गरेको उमेरलाई छेक्दै जवान देखाउनमा सहयोगी हुन्छ । मानिसहरुमा उच्च कोलेस्ट्रोलको समस्याले पीडा दिएको हुन्छ ।
तर, कोलेस्ट्रोलको समस्याबाट राहत पाउनका लागि फर्सीको मुन्टाको साग भने निकै उत्तम मानिन्छ । फर्सीको पातमा पाइने फाइबरले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुका साथै तपाईँको मुटुलाई पनि स्वस्थ राख्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।
त्यस्तै फर्सीको मुन्टाको साग खाँदा आँखा तेजिलो बन्छ । फर्सीको पातमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जुन हाम्रो आँखाको लागि राम्रो मानिन्छ ।
Don't Miss it दुविधाकाे स्थितिबाट कसरी बाहिर निस्कने ? जान्नुहाेस्
Up Next के तपाइ आफुलाइ कमजाेर महसुस गरिरहनु भएकाे छ ? एकचाेटी पढ्नुहाेस्
चिनीरोगीले के खान हुन्छ र के हुँदैन ?
मधुमेहलाई अङ्ग्रेजीमा डायबिटिज, डायबिटिज मिलाइटस वा डायबिडिज मलाइटस (अमेरिकामा) भनिन्छ भने नेपालीमा चिनीरोग भनेर पनि चिनिन्छ। मानव शरीरमा हुने विभिन्न…
निदाएकै बेलामा मृत्यु हुने खतरनाक कारण यी हुन सक्छन
१‍. उमेर : ४० वर्षभन्दा माथिका यसको चपेटामा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। २. गर्धनको आकार : १७ इन्चभन्दा बढी मोटो गर्धन…
​दाँतमा किरा लाग्न नदिन के गर्ने ? थाहा पाउनुहोस
कोल्डड्रिङ्स खाँदा सकेसम्म पाइपको प्रयोग गर्ने बोतलबाट वा गिलासबाट खाँदा दाँतको बाहिरी भाग अर्थात इनामेल खियाउने काम गर्नसक्छ । तर…
खोकी लाग्दा कुनै पनि हालतमा यी कुराहरु खान हुदैन, जानी राखौँ
बदलिँदो मौसमको साथ-साथै रुघाखोकी हुनु एक सामान्य समस्या मानिन्छ । चिसो, प्रदुषण वा कुनै पनि मेडिकेशनको साइड इफेक्टको कारण खोकी…